Jaceylka goobta shaqada: Nin "Shaqada looga ceyriyay jaceyl dartii" - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaJaceylka goobta shaqada: Nin “Shaqada looga ceyriyay jaceyl dartii”
Jaceylka goobta shaqada: Nin “Shaqada looga ceyriyay jaceyl dartii”
Ganacsadaha u dhashay dalka Australia, Gary Lyon, ayaa weli aaminsan in ay ahayd “wax aad u xun” inuu shaqadiisa xilka maamulka saree shirkaddii uu u shaqeynaayay, ku waayo inuu xiriir jaceyl la yeeshay mid ka mid ah shaqaalaha.
Balse markii dambe si wanaagsan ayay ku dhammaatay – isaga iyo Tamra waxay is qabaan 12 sano, waxayna isu dhaleen gabar 11-sano-jir ah oo lagu magacaabo Charlotte.
Lyon iyo xaaskiisa waxay magaalada Brisbane ku leeyihiin shirkad, wuxuuna sheegay inuu ku farxi lahaa haddii labo ka mid ah shaqaalihiisa ay is jeclaadaan.
“In yar xitaa ima dhibteen,” ayuu yiri, “haddiiba aysan saameyn ku yeelaneyn shaqadooda.”
Mr Lyon ayaa la soo xiriiray BBC-da ka dib markii uu akhriyay sheekada ku saabsan in McDonalds ay shaqada ka tireen madaxii shirkadda, Steve Easterbrook, ka dib markii uu xiriir la yeeshay mid ka mid ah shaqaalaha.
Shirkadda iibisa cunnooyiinka fudud ee laga leeyahay Mareykanka ayaa sheegtay in Mr Easterbrook uu “khilaafay shuruucda shirkadda”.
Arrintan ayaa tooshka ku iftiimisay dhibaatooyiinka ay shaqaaluhu la kulmi karaan haddii ay xiriir jaceyl ku sameeyaan goobta shaqada, gaar ahaanna haddii uu midkood ka xil sarreeyo kan kale.
‘Dubbe la Tuuray’
Kiiska Lyon haddii aan eegno, wuxuu madax ka ahaa shirkad sameysa albaabbada iyo daaqadaha. Wuxuu xaaskiisa hadda la kulmay mar ay ku soo biirtya kooxdiisa iyadoo ahayd xiriiriye mashruuc. Saddex illaa afra bilood ka dib, way iska heleen.
“Mar walba waan jeclaa, iyadana waxay mar walba ii sheegi jirtay in ay iga heshay sidoo kale,” ayuu yiri. “Halkaas ayayna ka bilaabatay.”
Markaas, wuxuu jiray 41 sano iyaduna 14 sano ayay ka yareyd oo waxay jirty 27 sano. Markii hore qarsoodi ayay ka dhigeen xiriirkooda, ka dibna way shaaciyeen inuu xiriir jaceyl ka dhexeeyo.
“Ma rumeysan kartid inay dadka kale dhib ku qabaan, balse waxaa soo baxaysa inay sidaas tahay, adiguna ma garan kartid sababta, maxaa yeelay saameyn kuma yeelaneyso shaqadaada,” ayuu yiri.
“Waqti badan ayaad la qaadaneysaa dadka aad isla shaqeysaan, marka si fiican ayaad u baraneysaa.”
Ka dib markii lammaanaha la isku arkay, muddo saddex bilood ah, waa loo yeeray isaga, wuxuuna hadalka u dhigay: “Ka dib wax walba way caddaadeen.”
Markaas ayaa shaqada laga tiray balse gacalisadiisa lagama cayrin shaqada. “Xoogaa way carootay, balse wax ay ka qaban kartay ma jirin. Waa in aad sii socota.”
Lyon wuxuu sheegay in xilligaas uusan jirin sharci rasmi ah oo diyaarsanaa oo kala caddeynayay is guursiga saaxiibbada shaqo wadaagga ah.
Go’aanka shaqada looga ceyriyay wuxuu ku tilmamay in uu ahaa “mid sabab la’aan ah” wuxuuna sheegay in taas ay u dhiganto “fikrad duugowday oo caalamka soo martay”.
“Maamulayaasha mamnuuc miyey ka tahay in ay jeclaadaan shaqaalaha ka hooseeya? Maya, haddii ay tahay wax ay isku waafaqsan yihiin,” ayuu yiri.
“Ma dooran kartid goobta aad jaceyl ka heleysid, haddaba maxay tahay sababta loo ciqaabayo labada qof, iyadoo mid ka mid ah shaqada laga ceyrinayo?”
Sida laga soo xigtay cilmi-baarisyo kala duwan, illaa afar ama seddax meelood meel, xiriirada aan dhammaan waxay ka bilowdeen goob shaqo.
Laakiin dabcan, dhamaan dadka isla shaqeeya xiriirkoodu ma waqti dheera. Qaar waa xiiso, kuwana waa is rabitan keli ah, kuwa kalana hal habeen bay ku kala tagaan – Marka wax kasta ayay noqon karaan.
Waxa jiro tiro kiisas heer sare ah oo la kulmay iebedelka badan ee nolosha, taas oo ah marka israbitaanka aadanaha iyo hab-dhaqanka shaqada ay is waafaqi waayaan.
Madixii fulinta shirkad sameysa qalabka casriga ah ee sirdoonka, Brian Krzanich, ayaa is casilay 2018-kii ka dib markii uu jebiyay shuruucda shirkadda uuna xiriir la sameeyay mid ka mid ah shaqaalaha.
Maamulihii barta socdaalka ee Priceline.com, Darren Huston, ayaa shaqada ka tagay 2016-kii, ka dib markii baaritaan la sameeyay lagu ogaaday in uu xiriir la leeyahay mid ka mid ah Shaqaalaha.
Balse, 2009-kii, madixii shirkadda Aviva, Andrew Moss, ayaa shaqadiisa siiwatay in kastoo xiriir culus oo isu tanaasul ah uu la yeeshay mid ka mid ah shaqaalaha oo horey uu u qabi jiray mid ka mid ah agaasimayaashii ugu sarreeya shirkaddaas. Wuxuu shaqada ka tagay 2012-kii.
Isla xilligaas, waxaa taagnaa eedihii xadgudubka galmo ee loo haystay Harvey Weinstein oo ahaa soosaara aflaanta Hollywood-ka, taas oo laamaha shaqaaleysiinta ee shirkadaha waaweyn ku qasabtay in ay ka feejignaadaan xiriirka dhexmari kara shaqalahooda ee gudaha Mareykanka.
Si kastaba, Ben Willmott, madaxa shuruucda dadweynaha ee machadka Chartered ee qaabilsan Shaqsiyadda iyo Horumarka, wuxuu sheegay in tiro yar oo shaqaalaha ka mid ah ay sameeyaan xiriiro wax u dhima dhaqanka shaqada.
“Inta badan dadka loo shaqeeyo waxaa ka go’an in si kale ay wax u wajahaan,” ayuu yiri. “Waxay sameysanayaan shuruuc la xiriirta sharafta iyo xushmadda shaqada iyo ka hortagga handadaadda iyo fara-xumeynta, kuwaas oo dejinta shuruuc cad oo ah wax ka qabashada cabashooyiinka la xiriira dhaqan xumada.”
“Haddii aad si adag wax kasta u wajahdo, waxay noqon kartaa in aadan shaqaalahaaga aaminsanayn in ay si dad waaweyn u dhaqmayaan,” ayuu yiri.
Jaceylka iyo horumarka shaqada
Dabcan, waxaa jiro dano adag oo iska soo horjeeda oo dhici kara haddii shaqaalaha aysan feejigneyn.
“Haddii mid ka mid ah labada is jecel uu madax ka yahay qiimeynta, mushaar kordhinta, dalacsiinta iyo shaqo-gelinta, waxaa markaa jiri karo halis weyn oo ah qof jecleysi iyo in shaqaalaha kale ay u arkaan eex,” Rebecca Thornley-Gibson, oo la sheqeysa shirkadda sharciga ee lagu magacaabo City of London.
Boobka Baahsan Ee Ka Jira DDS Iyo Hadalka Wasiirka Ee Shakiga Gelinaya Ogaalka Madaxweyne Mustafe